5 အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများတွင်ဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများတွင်ဥရောပ
ဥရောပတိုက်အပြည့်အဝတ ကြွယ်ဝသောသမိုင်း, ထူးခြားတဲ့ပုံပြင်များ, Adventures, တခါတရံနက်နဲသောအရာတခုကို. တိုက်ကြီးတိုင်းရှိရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုံ mystifying တည်နေရာ. သို့သျောလညျး, ဒါဟာထင်ရသောဥရောပတိုက်ရှိအချို့၏အများဆုံးအံ့သြဖွယ်နှင့်ထူးဆန်းသောနေရာများကိုကမ္ဘာ့. နက်နဲသောအစဉ်အမြဲအယူခံကိုစွန့်စားခရီးသွား. ထိုကွောငျ့, ဒါကြောင့်လာအဖြစ်အံ့သြစရာဘာကြောင့်ပိုပြီးစွန့်စားခရီးသွားအောင်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရောက်ရန်ဒီနေရာ. တစ်ဦးကရထား Save အတူတကွစေတော်မူပြီတစ်ဦးစာရင်းများအများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရပ်အတွက်ဥရောပအကြောင်းသေချာဖို့ astound အထင်တောင်မှအများဆုံးဝါ၏ခရီးသွား.
1. အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများတွင်နယ်သာလန် – Giethoorn
ပထမနေရာအနိုင်အကြံပြုသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသဘောသည်အတော်လေးမူထူးခြားတဲ့. တည်ရှိပြီးနယ်သာလန်အတွက်နဲ့အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်အများဆုံးသာယာသောအရပ်သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ. Giethoorn တစ်ရွာကဲ့သို့ဖြစ်အဘယ်သူမျှမကအခြား. များစွာသောထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖြစ်ပြီးပြည့်စုံသောအပြေးမှခေတ်သစ်အသက်တာ. ဒါဟာအဘယ်သူမျှမလမ်းနှင့်ခဲလှ၏မည်သည့်ဒေသတွင်နေထိုင်ကြသောပြည်သူက. တကယ်တော့, ဒါဟာအမျိုးမှပယ်ဖြတ်၏ကျန်နယ်.
အသုံးစရိတ်အတွက်အချိန် Giethoorn ဖြစ်စေမည်ကဲ့သို့သင်ခံစားရကျန်ကြွင်းစေပြီခေတ်သစ်ကမ္ဘာနှင့်၎င်းဒုက္ခဆင်းရဲလုံးဝ. အချိန်အမည်အားဖြင့်ပျံသန်း, နှင့်သင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်လုံးဝကင်းပြီး. အဖြစ်ဝေး၏ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားရွာသွား, ပထမဦးဆုံးအရာသင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်ကဘယ်လောက်သေးငယ်သည်. သင်လည်းသတိထားမိမှာနည်းငယ်ကသာရှိပါတယ်တဲ့လမ်းမှယူ. တကယ်တော့, ရှိလိမ့်မည်လမ်းမြောင်းနှင့်လှေစီးရရှိနိုင်ထက်လမ်းခရီးကို. ရွာ၌အိမ်ကိုပေးမည်သင်အဟောင်းကမ္ဘာမွာ.
2. Eisriesenwelt ရေခဲဂူ
သင့်သင်သည်အစဉ်အဆက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့သြစတြီးယား, သင်အစီအစဉ်အလည်အပတ်တစ်ခု၏အကြီးမားဆုံးသဘာဝအံ့ဘွယ်သောအမှုတည်ရှိကြောင်း. Eisriesenwelt သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကြီးဆုံးရေခဲဂူတည်ရှိသောလောက၌. တကယ်တော့, အခါအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့, ဒါဟာနည်းလမ်းများ ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီကြီးများ၏. ရာထူးသို့ဤဟု့ဂူစေပါလိမ့်မယ်သင်ခံစားရလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့အပေါ်ထားသည့်ပေါ့ပါးရုပ်ရှင်. အများအပြားရှိပါတယ်ကြောင်းအရာကိုအံ့ဩနေကြတယ်က Eisriesenwelt.
ပထမဦးစွာ, ကိုသက်သက်အရွယ်၏ရေခဲဂူအလိုလိုသင်ချန်ထားမည်မှာအံ့. သွားမှတဆင့်သင်ယူနိုင်ခန့်မှန်းခြေတစ်နာရီခွဲမှဖြည့်စွက်. ဒုတိယအ, အတွင်းပိုင်းအဂူသင်ချန်ထားမည်ချမ်းနှင့်သဘော. မြောက်မြားစွာအစဉ်ကိုရေခဲကိန်းဂဏန်းများ, ရေခဲပန်းပု, နှင့်ရေခဲနံရံအတော်လေးအထင်ကြီးနှင့်ထွက်ခွာအပြားဆုံးရှုံးသည်စကား. ဤသူတချို့ကအကြီးအကျယ်ရေခဲသင်္ခါရဖြစ်ကြောင်းအထက်ပိုမြင့် 20 မီတာ! မှောင်မိုက်၌အဂူ, ရေခဲမွမဂ္ဂမီးလိမ့်မည် “လာ။” အဖြစ်အလင်းဝင်သည်အလင်းနှင့်အကအခုန်အတွက်နောက်ခံ, သဘောသဘာဝနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ကျိန်းသေသင်ထိမှန်. နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, မည်သူမဆိုနီး Werfen, သြစတြီးယားလိုအပ်ချက်များကိုအချိန်ယူသွားရောက်ရန် Eisriesenwelt.
ဆာ့ဇ်ဘဂ်မှ Werfen ရထား
မြူးနစ်မှ Werfen ရထား
ဝေါဟာရရင်းမြစ်မှ Werfen ရထား
ယင်အ Werfen ရထား
3. အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်နေရာများတွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အီတလီနိုင်ငံ – Capuchin အ Palermo
အဆိုပါ Capuchin အ Palermo ပို shiver သင့်ရဲ့ကျောရိုး. အလုံးစုံမိတ္ဖက္သောမွေ့လျော်၏ခံစားမှုကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ကွောကျရှံ့, အ catacombs အကောင်းဆုံးနေရာသို့သွားရောက်ကြည့်ရှု. ဤ catacombs ကြသည်တာက္သည္အားဖြင့်လာနှင့်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေမှနေ့စဉ်လူ. ဒါကြောင့်ယူအားလုံးသည်တဦးသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့နဲ့တူအချို့သောကြီးမားတဲ့အသက်သောမေးခွန်းများ.
နောက်ကွယ်ကဇာတ်လမ်းအ Capuchin Catacombs အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖွယ်. ဒါဟာနောက်ဆုံးအနားယူနေရာမှအကြွင်းအကျန်သောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစား. အများစုအတွက် catacombs နေသောရဟန်းနှင့်ချမ်းသာအချိန်. သို့သျောလညျး, အနည်းငယ်ရှိပါတယ်ဘုံမိတ်ဆွေအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်။. အ catacomb ဆန့်လက်အောက်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်ကပ်လျက်ဘုရား. ကိုတဆင့်လမ်းလျှောက်စင်္ကြံ၏အ catacombs, သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ခန့်မှန်းခြေ 8000 က်ပ္စည္းအလောင်းတွေ. အဲဒီအချို့ကိုအတော်လေးအဟောင်း, ပင်နောက်ကျောမှတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့အ ၁၆၀၀s. အလောင်းတွေဖြစ်ကြ embalmed နှင့်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်. နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, အဖြစ်ကြောက်စရာအဖြစ် catacombs ဟန်, သူတို့ ရေပန်းစားခရီးသွားဧ နှင့် တန်ဖိုးရှိတစ်ခရီးစဉ် သူတို့အဘို့အနိုငျသောအယူ.
ကက္အူေခ်ာင္းကို Palermo ရထား
Bagheria အ Palermo ရထား
Trapani အ Palermo ရထား
အဆိုပါ ChateauႏBrissac တောင်ဘက်၌တည်ရှိ၏တစ်စ, မြို့တမြို့၌ရှစ်မြစ်ချိုင့်ဝှမ်း. ဒါဟာအမြင့်ဆုံးရဲတိုက်၏တပြင်လုံးကိုအတွက်ပြင်သစ်. ဤလှပသောပြင်သစ်ရဲတိုက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာ ၁၅ ရာစုကိုစမ်းသပ်အချိန်. မီ၎င်းယာမ်ားအားဖြင့်ဆင် Brissac, ဒါဟာ အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ဒါကနောက်ကျောရက်စွဲမှ ၁၁ ရာစုနှစ်. သို့သျောလညျး, အဆင်ရွင္ေသို့အကျယ်တို့ကိုစတိုင်ရဲတိုက်.
ChateauႏBrissac တူသယောင်ထင်ရသည်သာမန် Chateau မှာပထမဦးဆုံး. သို့သျောလညျး, နောက်ကွယ်မှာနေ့စဉ်မျက်နှာစာ, အဲသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့်ဒဏ္ဍာရီမောင်းမှရောက်. မြောက်မြားစွာသောတစ္ဆေဇာတ်လမ်းများဖြင့်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနှင့် chateau လိုလို. လူကြိုက်အများဆုံးကအစိမ္းေရာင္မိန္းကေလး. အရဒဏ္ဍာအသတ်ခံခဲ့ရသည်ရဲတိုက်၌အချိန်ချိန်မှာအလယ်ပိုင်းတွင် ၁၅ ရာစု. လ Dame Verte, သို့မဟုတ်အဖြစ်ရေပန်းစားလာခဲ့သည်, အစိမ္းေရာင္မိန္းကေလး, အကိုပြောတတ်သောရဲတိုက်ဆဲ. များစွာသောသူတို့ပြောကြပြောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံကိုတဆင့်လမ်းလျှောက်မြေသို့မဟုတ်ရပ်နေထိုတာဝါတိုင်. လက်ရှိနေထိုင်သူများပြောသူတို့စိုက်ပျိုးကြလေ့သူမ, ဒါပေမယ့်အများအပြားခရီးသြားမ်ားခဲ့ကြကြောက်. အပြင်ကနေကိုမြင်လျှင်သူမ၏, အများစုကသင်ကြားနိုင်သူမညည်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ထိုရဲတိုက်၌နံနက်အစောပိုင်းနာရီ.
5. အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လ်ဂျီယံ – Dinant
Dinant အခြားမြို့ငယ်လေးကစိတ်အာရုံ၏နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေမှဧည့်သည်. ထိုမြို့အတွက် Namur ပြည်နယ်၏ဂျီ. ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောနေရာသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေထီးမှအကြီးမားတဲ့မြို့အသက်တာ. အပေါင်းမြို့၏အသက်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသဘာဝရှုခင်းရင္သပ္ရႈေ. အဆိုပါနောက်ခံတောင်၏မြို့နှင့်အတူပေါင်းစပ်အမြစ် Meuse မှတဆင့်စီးဆင်းသောမြို့များမှာလုံလောက်စႏိုင္သည္မည်သူမဆိုကန်ပြန်ကယ္ခက္ခဲ. ထိုသို့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ကိုစိတ်နှလုံးအများအပြားဧည့်သည်များနှင့်နဲ့တူတယ်လို့ခံစားမိစေပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြောင်းအခြားကမ္ဘာထဲမှာ.
ဘရပ်ဆဲလ်အ Dinant ရထား
Antwerp ကို Dinant ရထား
ဂျအ Dinant ရထား
Liege အ Dinant ရထား
သင်အဆင်သင့်ကြည့်ဖို့မြောက်မြားစွာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအရပ်တို့ကိုဥရောပတိုက်ကမ်းလှမ်း? ဤအတူစတင်ငါးအများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများနှင့်နေရာကိုကြည့်လမ္းသင်ကြာ. စီစဉ်ဖို့သေချာပါစေ၊သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကောင်းကောင်းနှင့် စာအုပ်ရထားလက္မွတ္မ်ား ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်အတူအချိန်ပေါ်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 အများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနေရာများတွင်ဥရောပ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-mysterious-places-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#နကျနဲသိမျမှေ့သော #mysteriousplaces europetrains europetravel eurotrip trainjourney